ကြံကြံခံနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် ပြုစုပျိုးထောင်ဖို့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာပါတဲ့ နည်းလမ်း(၉)ခု - Chit MayMay
Home Child Care ကြံကြံခံနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် ပြုစုပျိုးထောင်ဖို့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာပါတဲ့ နည်းလမ်း(၉)ခု
စိတ်သောကကြုံရတာဟာ ကလေးတွေအတွက် ကောင်းကြောင်း တစ်ချို့မိဘတွေ မကြာခဏ ပြောလေ့ရှိပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ သူတို့ကြီးပြင်းလာတဲ့အခါ ကမ္ဘာကြီးက စိတ်ပျက်စရာတွေနဲ့ ပြည့်နေတာကြောင့်ပါ။ လောကဓံကို ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်အောင် ကလေးဟာ စောင်မပါဘဲ အိပ်စက်တတ်ဖို့ သင်ယူသင့်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ အမှန်တကယ်လိုချင်တာက ခံနိုင်ရည်ရှိသော ကလေးတွေကို ပြုစုပျိုးထောင်ဖို့ နှင့် လူတိုင်းစောင်ရှာတွေ့နိုင်တဲ့ နွေးထွေးသောကမ္ဘာကြီးကို ဖန်တီးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကျွန်မတို့ ခံနိုင်ရည်ကို ဘယ်လိုမွေးမြူမလဲ? ကလေးတွေကို ဘယ်လိုပျိုးထောင်ပေးမလဲ? ဆိုတဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေကို မျှဝေပေးလိုပါတယ်။
ကျရှုံးခြင်းက ခံနိုင်ရည်တည်ဆောက်တာလို့ အများက ယူဆကြပါတယ်။ သို့သော် ကလေးတွေဟာ ထပ်ခါထပ်ခါ ကျရှုံးပြီး ဆက်ကြိုးစားဖို့အတွက် ပံ့ပိုးမှုမရပါက သူတို့သင်ယူသမျှ အရာအားလုံးဟာ သဲထဲရေသွန် ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ အရာရာမှားယွင်းသွားရင်တောင် သင်ယူခြင်း အတွေ့အကြုံကနေ ပြန်ကြိုးစားပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်အဖက်ဆယ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ အနည်းဆုံးတော့ အောင်မြင်မှု အတွေ့အကြုံတစ်ချို့နဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးမှုများစွာ လိုအပ်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့အားလုံးဟာ စိန်ခေါ်မှုတွေကို ကျော်လွှားခြင်းကနေ သင်ယူတာက မှန်ပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ အောင်မြင်မှုရလာတဲ့အခါ ပိုသင်ယူတတ်လာပါတယ်။ အဲ့ဒ်က ကျွန်မတို့ကို ပိုပြီး ခက်ခဲတဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေကို ဖြေရှင်းဖို့ လှုံဆော်ပေးပါတယ်။ ပံ့ပိုးမှုမပါဘဲ ကျရှုံးခြင်းက confidence မရှိတဲ့ သံသရာတစ်ခုကို ဖြစ််စေပါတယ်။ အရှုံးပေးလေ ပိုပြီးကျရှုံးလေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် တစ်ဖက်ကနေ သင့်လျော်တဲ့ ပံ့ပိုးမှု၊ ကာကွယ်မှုပေးပြီး တစ်ဖက်က ယုံကြည်မှုနှင့် အရည်အချင်းကို တိုးမြှင့်နိုင်ဖို့အတွက် ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာ မေမေတို့ သိထားရပါမယ်။
၁။ ထိန်းချုပ်မှုကို ရပ်တန့်ပြီး နည်းပေးလမ်းညွှန်ပါ
ကလေးကို ဟိုဟာမလုပ်နဲ့ ၊ဒီဟာလုပ်ဆိုပြီး ထိန်းချုပ်ထားတာထက် နည်းပေးလမ်းညွှန်လုပ်တာက ကလေးတွေရဲ့ စွမ်းရည်ကို တိုးတက်အောင် ကူညီပေးပါတယ်။ မိဘတစ်ယောက်ရဲ့အလုပ်က ကလေးကို ပံ့ပိုးပေးဖို့ဖြစ်တာကြောင့် သူတို့ဟာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်လာနိုင်ပါတယ်။ ကလေးတစ်ယောက်ကို အရည်အချင်းပြည့်မီဖို့ အခွင့်အရေးရစေပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ confidence ကိုလည်း တည်ဆောက်ပေးနိုင်ပါတယ်။
၂။ စင်းလုံးချောဖြစ်ခြင်းက ပန်းတိုင်မဟုတ်ကြောင်း သတိရပါ
ရလဒ်က အရမ်းကြီး အရေးမပါလျှင် သင့်ကလေးရဲ့ တာဝန်ပေါ်မှာ “တိုးတတ်ဖို့” ဆိုတဲ့ သွေးဆောင်မှုကို တွန်းလှန်ပါ။ ကြားဝင်ခြင်းက ကလေးရဲ့ confidence ကို အဟန့်အတားဖြစ်စေပါတယ်။
၃။ ငယ်စဉ်ကတည်းက သူတို့ကိုယ်တိုင်လုပ်ဖို့ ကြိုးစားပါစေ
သင့်ရဲ့ စိုးရိမ်မှုတွေကို ထိန်းထားပါ။ ကျောခိုင်းထားဖို့တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့လုပ်သမျှကို ရပ်ကြည့်နေပါ၊ ပြုံးပါ။ ကလေးကို အမှန်တကယ် အကူအညီဖြစ်စေမယ့် ဘယ်နည်းနဲ့မဆို ကူညီပေးဖို့ အဆင်သင့်ရှိပါ။ သို့သော် သင့်လျော်တဲ့ အားပေးမှုမှလွဲပြီး အမှန်တကယ် ကူညီဖို့ မလိုပါက ခဏလောက်နေလိုက်ပါ။ သူတို့လုပ်နိုင်တဲ့အခါ ဂုဏ်ယူစွာပြုံးပါ။ ” ကြည့်စမ်း၊ ငါ့သားလေး လုပ်နိုင်တာ မေမေသိတာပေါ့” လို့ပြောပေးပါ။
၄။ စီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေကို ကိုင်တွယ်ခြင်းဖြင့် သူတို့ကို ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်စေပါ
စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးရေးသုတေသီများက ဒါကို ” ငြမ်း”လို့ ခေါ်ပါတယ်။ သင်က တစ်ခုခုကို ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာ သရုပ်ပြပါ၊ (သို့) strategy တစ်ခုကို အကြံပြုဖို့ စကားလုံးတွေသုံးပါ။ ဒီအကူအညီက သူတို့ အသစ်တစ်ခုကို ကြိုးစားတဲ့အခါ အောင်မြင်အောင် ကူညီပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့ အကူအညီနဲ့ အောင်မြင်မှုသေးသေးလေးတွေက သူတို့ကိုယ်တိုင် အသစ်တွေကို ကြိုးစားဖို့ confidence ရှိစေပါတယ်။
၅။ ကျရှုံးမှုအတွက် သူတို့ကို မသတ်မှတ်ပါနဲ့
သူတို့ကို အောင်မြင်စေဖို့ structure ပေးပါ။ ရှေ့ဆက် ကျရှုံးမှာကို သင်မြင်တဲ့အခါ ဝင်ပါသင့်သလား (သို့) သင်ခန်းစာယူခွင့် ပြုရမှာလား?
ကလေးတွေကို ကယ်တင်ခြင်းဟာ အရေးကြီးတဲ့ သင်ခန်းစာများကို သင်ယူခြင်းမှ တားဆီးနိုင်ပါတယ်၊။ သို့သော် ကလေးတွေဟာ မိဘအနားမှာ ရပ်နေလျှင် သူတို့ကို မချစ်လို့ မကူညီတာဟု ခံစားရစေပါတယ်။ သင်ခန်းစာယူစေခြင်းအစား လေ့ကျင့်ပေးသင့်ပါတယ်၊ မိဘတွေအနေနဲ့ သူတို့ကို မကျရှုံးအောင် အမြဲတမ်း ဂရုစိုက်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ကိုယ်သူတို့ စီမံခန့်ခွဲတတ်အောင် သင်ပေးရပါမယ်။
သူတို့ မလုပ်နိုင်တော့ဘူးဆိုမှ ဝင်ကူညီပေးပါ။ ဒါက သူတို့လမ်းလွဲသွားရင် သူတို့ကို ကယ်တင်နိုင်မယ်ဆိုတာကို ကလေးသိစေယုံသာမက သူတို့ဘာသာ သူတို့မလုပ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာလည်း သိလာစေပါတယ်။
၆။ အားပေးပါ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အားပေးတတ်အောင် သင်ပေးပါ
လူသားအားလုံးဟာ အားပေးမှု လိုအပ်ပါတယ်။ ကလေးကို အားပေးခြင်းက အပြုသဘောနှင့် လှုံ့ဆော်မှုကို ခံစားရစေရုံသာမက သူတို့ရဲ့ ဘဝအတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အားပေးတတ်အောင် ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။ သုတေသနပြုချက်များအရ ခက်ခဲတဲ့ အခြေအနေများမှ (I Can do it ဆိုတဲ့) ကိုယ်ကိုယ်ကို ပြောဆိုတဲ့ ကလေးတွေဟာ ခက်ခဲတဲ့ တာဝန်များကို ကျွမ်းကျင်ဖို့ လွယ်ကူကြောင်း တွေ့ရှိရပါတယ်။
“မင်းမအောင်မြင်ရင် ထပ်ခါထပ်ခါ ကြိုးစားပါ”၊ “ငါလုပ်နိုင်တယ် ထင်တယ်၊ ငါလုပ်နိုင်တယ်ထင်တယ်”၊ “အလေ့အကျင့်က တိုးတတ်စေတယ်” စသဖြင့် ကလေး အခက်အခဲကြုံရတဲ့ အချိန်တွေမှာ ဂါထာအဖြစ် ထပ်ခါတလဲလဲ ပြောဖို့ ဆိုရိုးတွေပေးပါ။ ကလေးတွေအတွက် အားပေးမှုနှင့် လှုံဆော်ဖို့ အလိုအလျောက်နှစ်သိမ့်မှုပေးသော အသံသာ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲ ကြမ်းတမ်းတဲ့ ဝေဖန်သံ ဝင်လာရင် စိတ်ပျက်စရာဖြစ်လာပါတယ်။
၇။ အကဲဖြတ်မယ့်အစား ဖော်ပြပါ၊ စာနာပါ
ကလေးရဲ့ လုပ်ဆောင်မှု အကျိုးရလဒ်တွေကို ချီးမွမ်းပေးပါ။ ဘယ်လိုလုပ်လိုက်ရင် ကောင်းမယ်ဆိုတဲ့ သင့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကို မပေးပါနဲ့ ။ သူတို့အလုပ်ကို ချင့်တွက်ဖို့ ပြင်ပရင်းမြစ်တွေပေါ်မှာ မှီခိုတတ်အောင် သင်ကြားပေးပါ။ သူတို့ဘာသာသူတို့ အကဲဖြတ်ဖို့ စွမ်းအားပေးခြင်းဖြင့် ကလေးကို ပိုကောင်းစေအောင် သင့်ရဲ့ ချီးမွမ်းမှုကို မွမ်းမံနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ ဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာသာ ဖော်ပြပါ။ သူတို့ဘယ်လိုခံစားရမယ်ဆိုတာ စာနာပေးပါ။
၈။ ရလဒ်တွေကို မဟုတ်ဘဲ အားထုတ်မှုပေါ်မှာ အာရုံစိုက်ပေးပါ
ရလဒ်တွေကိုပဲ မကြည့်ပါနဲ့ ။ ကလေးရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှု၊ ဇွဲကောင်းမှုနှင့် ပတ်သတ်ပြီး အကောင်းမြင်တဲ့ တုံ့ပြန်ချက်တွေကို ပေးပါ။ မေမေတို့အနေနဲ့ သူတို့ကို အသက် ၆နှစ်် (သို့) ၁၆နှစ်အရွယ်မှာ ငါဒီအောင်မြင်မှုကို မကျအောင် ကြိုးစားရမယ်ဆိုတဲ့ သူတို့ရဲ့ အောင်ဆုပေါ်မှာသာ မမှီစေချင်ပါဘူး။ မေမေတို့ရဲ့ ရည်မှန်းချက်က သူတို့ကို ကြိုးစားဖို့ ၊ ဆက်လက်လေ့ကျင့်ဖို့နှင့် တိုးတတ်အောင်လုပ်ဖို့နဲ့ ခက်ခဲတဲ့အလုပ်ကို ပန်းတိုင်ရောက်နိုင်အောင် သင်ယူဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
၉။ သင့်ကလေးရဲ့ ခံစားချက်တွေကို မကြောက်ပါနဲ့
ကလေး စိတ်ပျက်စရာ ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါ မေမေတို့ရဲ့ စာနာမှုက အခက်အခဲကို ကျော်လွှားရာမှာ အရေးပါတဲ့ အချက်တစ်ချက် ဖြစ်တာကို သတိရပါ ။ သူတို့စိတ်ပျက်စရာ ကြုံလာတဲ့အခါ အားပေးပါ။ အထူးသဖြင့် သူတို့ကို သင်ယုံကြည်ကြောင်း ဖော်ပြတဲ့အခါ နောက်တစ်နေ့ သူတို့ထပ်ကြိုးစားဖို့ အသင့်ဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ ဒါက ကလေးတွေရဲ့ ခံနိုင်ရည်ဖွံ့ဖြိုးမှုပါပဲ။
ဒါတွေအားလုံးက ကလေးကို ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းတွေ ရှိလာစေမယ်၊ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးတတ်လာစေမယ်၊ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ လုပ် ဆောင်တတ်လာစေမယ်၊ စိတ်ချစရာ ကောင်း တဲ့ ကလေးတွေဖြစ်လာစေမှာပါ။
Previous articleအုပ်ထိန်းသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကလေးငယ်တိုင်းကို နေ့စဥ်ပြောပေးသင့်တဲ့ စကားများ
Next articleသင့်ရဲ့ ရာသီခွင်အရ သင်ဟာ ဘယ်လိုအမေမျိုးလဲ